नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अरुण तेस्रोमा बम बिस्फोट : छबिलाल र बाबुरामले रोपेको अशान्ति यहाँ गएर फेरी बिस्फोट पो भएछ त !
अरुण तेस्रोमा बम बिस्फोट : छबिलाल र बाबुरामले रोपेको अशान्ति यहाँ गएर फेरी बिस्फोट पो भएछ त !
भन्दा कथित र अज्ञात समुह तर यथार्थमा माओवादीको बिद्रोही समूहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउसको निर्माणाधीन भवनमा शनिबार राति बम बिस्फोट गराएका छन् । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका–३ को दिदिङमा रहेको पुखुवा पावर हाउसमा कुकर बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोटपछि निर्माणाधीन भवनमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बेदप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । बम विस्फोट गर्ने समूहको खोजी तीव्र पारिएको छ । विस्फोटको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन । दुई वर्ष अघि पनि उक्त स्थानमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले आगजनी गरेका थिए ।